Uqoqosho kunye nefuthe labameli bezoqoqosho kwimarike | Ezezimali
USusana Maria Urbano Mateos | | Uqoqosho ngokubanzi
Banamagama iiarhente zoqoqosho kwabo badlali bangenelela kuqoqosho, benendima ethile kunye nezenzo kwinkqubo yolu hlobo, phantsi kwemithetho ethile. Iya kuba ngabantu okanye amaziko aya kuthi enze izigqibo kule meko.
Ngenkcazo yezi arhente, umdlalo wezoqoqosho uhlanganisiwe, kwaye kunokwenzeka ukuba kube lula ukwenza iinkqubo ezenzeka kule ndawo., kukhokelela kuhlalutyo olulula kunye nokuvumela inkcazo yokusebenza kwayo.
Iarhente yezoqoqosho inokuthi ithathelwe ingqalelo njengaye nawuphi na umntu osemthethweni okanye wendalo ozimeleyo osebenzisa uhlobo oluthile lomsebenzi wezoqoqosho kwintengiso. La maziko aqhuba imisebenzi eyahlukeneyo yezoqoqosho anokubandakanywa, nokuba imeko yawo isemthethweni okanye indlela yezemali.
Kuyenzeka ke ukuba uyiqonde njengearhente yezoqoqosho, abo bathatha inxaxheba kulungiselelo, kwimveliso nakurhwebo lweempahla kunye neenkonzo; ngezivumelwano, amalungiselelo kunye nezivumelwano ekuvunyelwene ngazo, oko ke kuchaphazela umsebenzi wabo kwiimarike kunye nokudlula kuqoqosho lukaRhulumente ngenzuzo okanye ngeniso yorhwebo abalawula ukuyifumana.
Sonke singabameli bezoqoqosho kuba sonke ngandlela thile senza inkqubela kwimisebenzi yezoqoqosho, sisebenzisa izinto okanye iinkonzo kwaye sihlawula ezi ngeniso esiyifumene kolunye uhlobo lwearhente.
Ngokuhlawulela ezi zinto kunye neenkonzo, siya kuba sikhuthaza imveliso yezinye iiarhente.
1 Zintathu izinto eziphambili kuqoqosho ngaphakathi.
2 Iiarhente zoqoqosho kunye neempawu zazo
3 Ubudlelwane phakathi kweearhente zezoqoqosho
Zintathu izinto eziphambili kuqoqosho ngaphakathi.
Abathengi (iintsapho), abavelisi (Shishini) nomlawuli wentengiso (imeko). Zonke zinendima eyahlukileyo nebalulekileyo, ukuseka ubudlelwane obusondeleyo phakathi kwabo kwisinyanzelo.
Imisebenzi eyahlukeneyo yoqoqosho iya kudibana kwaye ke ixhomekeke komnye.
Usapho, ukongeza ekusebenziseni, inokuba ngamalungu ayo athabatha inxaxheba kwimveliso yenkampani, inkampani yabathengi ikwindima yayo njengomthengi wegalelo. Urhulumente angadlala indima yomthengi kunye nomvelisi ngaxeshanye phantsi kweemeko ezithile.
Iiarhente zoqoqosho ziya kuvelisa ubutyebi obunokubanceda bonke abadlali.
Xa iarhente nganye ikwazi ukuzalisekisa iindima zayo phantsi kobudlelwane obukhoyo phakathi kwabo, kunokwenzeka ukuba uqoqosho lusebenze ngokwanelisayo, lwenze igalelo elilungileyo nelinamatheleyo kuluntu olulindelweyo.
Ukuba, ngokuchaseneyo, ezi arhente azisebenzi kakuhle, kwaye ngenxa yokuxhomekeka kwezinye, iimpembelelo zayo ezingalunganga kwezinye iiarhente zinokuchaphazela kakubi uqoqosho ngokubanzi.
Iiarhente zoqoqosho kunye neempawu zazo
Iintsapho zithathwa njengeeyunithi zoqoqosho ezijongene nokusetyenziswa, ichazwa njengenani labantu ababelana ngokuhlalisana.
Kwimeko yezoqoqosho nakwimbono eqwalaselwe kulo mbandela, Usapho lunokuba nelungu elinye okanye aliqela kubo, nokuba bayazalana na.
Usapho luya kuba yiarhente yezoqoqosho ngokuzimisela okukhulu ekusebenziseni, kwaye kwangaxeshanye kuya kuba ngumnini wezixhobo zemveliso, onika umsebenzi.
Iimpawu zemimandla enophuhliso oluncinci, usapho lunokuziqhelanisa nokuzisebenzisa. Babeza kuvelisa ngokwabo into ababeza kuyisebenzisa kamva.
Iintsapho zahlula umvuzo wazo ukuhlawula irhafu, ukonga kunye nokusetyenziswa; Ukuqhuba indima yomnini wezinto ezivelisayo. Nangona bengabathengi ngokugqwesa, baya kuba banikezela ngemeko yemveliso ngohlobo lomsebenzi phantse rhoqo.
Imindeni njengamaqela, okanye abantu ngabanye abathatha inxaxheba kuqoqosho lwesizwe, Bazakuba ngabo abaya kuba nepesenti enkulu yezixhobo ezidingwa ziinkampani ekusebenzeni kwazo, kwaye inokuthathwa njengeeyunithi ezisisiseko zokusetyenziswa.
Lo ngummeli wezoqoqosho, ngokusekwe kuhlahlo-lwabiwo mali olulinganiselweyo kunye nezinto ezinje ngokukhetha kwabo kunye neencasa zabo, uya kuba efuna ulwaneliseko kwiimfuno zabo ngokusebenzisa iinkonzo kunye neemveliso.
Ezi ziiarhente ezijongene nokuvelisa iimpahla kunye neenkonzo ngemeko yemveliso ebonelelwa ziintsapho.
Ukutshintshela kwezi zinto zemveliso, kufuneka babhatale iintsapho ngokutshintshisa ngomsebenzi, umvuzo; kutshintshiselwano lwenkunzi, izabelo kunye nenzala; okanye irente zomhlaba.
Xa iimpahla neenkonzo ziveliswa, zinikwa iintsapho, uRhulumente okanye ezinye iinkampani ukuba zisetyenziswe.
Iinkampani zinokuba zezabucala, ezoluntu okanye ezokuzithandela. Baqikelelwa ukuba bajonge esona sibonelelo sikhulu kunye nesibonelelo abanokufikelela kuso.
Zinokuhlelwa njengeeyunithi ezisisiseko zemveliso, Owona msebenzi wakhe uphambili kukwenza iimpahla kunye neenkonzo eziya kuthi zijolise ekufezekiseni eyona nzuzo inkulu, kuthathelwa ingqalelo ukusikelwa umda okunazo zombini ezobuchwephesha kunye nohlahlo-lwabiwo mali.
Ukuze ukwazi ukwenza lo msebenzi, kuya kubaluleka ukuba nenani elithile lezixhobo kunye nezinto ezinemveliso, ezinokuthengwa okanye zenziwe ikhontrakthi kuqoqosho lwasekhaya.
Ikakhulu izinto ezintathu zemveliso ziyaqwalaselwa. Inkunzi-yomzimba, apho izixhobo, oomatshini, njl. zibandakanyiwe, kwaye eyimali-eyimaliEzibandakanya iikhredithi kunye nemali. Eyesibini yezi emhlabeni, ukuyithelekisa nezinto zokwenza izinto kunye nemithombo yendalo okokugqibela, ngumsebenzi womntu, esele ikhona zombini umsebenzi wobukrelekrele nowomzimba.
Izixhobo zokuvelisa zibizwa njenge (igalelo) - igalelo, kunye (neziphumo) - iziphumo, ngenxa yoko kwiinkonzo kunye neempahla ezifunyenweyo. Iinkampani zinokuthi zithathelwe ingqalelo njengenkqubo evumela ukuguqulwa kokungeniswa kweziphumo, kusetyenziswa ubuchwepheshe obuthile boku.
Itekhnoloji inokuchazwa njengokusetyenziswa okanye ukusetyenziswa kwekhonkrithi kolwazi lwenzululwazi, oluya kuthi lubangele indibaniselwano yokufaka okwahlukileyo okanye izinto ezinemveliso ukuze ufumane imveliso. Kwimeko nganye yezembali, kuya kubakho iindlela ezizezinye zobuchwephesha ekwenziweni kweempahla.
Yenziwe ngamaseti oluntu. Ngaphandle kokunikezela kunye nokufuna iimpahla kunye neenkonzo kwangaxeshanye, iqokelela irhafu kwiinkampani nakwiintsapho ezimiselwe ukulawula umsebenzi wazo.
Ungenelelo olwahlukeneyo kuqoqosho; Iya kubonelela kwaye ifune iimpahla, iinkonzo kunye nemveliso, kwangaxeshanye iya kuqokelela irhafu eya kuyisasaza kwakhona ukwenza imisebenzi eyahlukeneyo.
Ezinye zezinto ezenziwayo ezifanelekileyo ziya kuba kukubonelela ilizwe ngeenkonzo zikarhulumente kunye neempahla (iiyunivesithi, oohola bendlela, njl. Ukulawula amaziko abo.
Iya kuba nendima yomthengisi kunye nokudilizwa kwezinto kwimarike.
Isishwankathelo, kunokwenzeka ukuba uchaze oko urhulumente uza kulawula imisebenzi yezoqoqosho ubukhulu becala, ukubonelela ngesakhelo somthetho sokuba iiarhente zisebenze.
Iya kuba ngumnini wenxalenye yemveliso njengempahla ekrwada, ikapitali kunye nobutyebi bendalo. Iyakubonelela uluntu ngezixhobo ezoneleyo, iqinisekise ukuba imisebenzi yezoqoqosho inokwenziwa phantsi kweemeko ezifanelekileyo.
Iya kuba ngulowo ubonelela ngeenkonzo kunye neempahla zoluntu njengemfundo, ubulungisa okanye impilo. Iza kusebenzisa umgaqo-nkqubo wemali ukuhambisa kwakhona ingeniso, ukunikezela irhafu eqokelelweyo kwinkxaso-mali yomvuzo omncinci, izibonelelo zokungaqeshwa, njl.
Ubudlelwane phakathi kweearhente zezoqoqosho
Iiarhente zoqoqosho zinxulumene kunye kwaye zigqithile ngokutshintshiselana kwempahla kunye neenkonzo.
Kule nkqubo imisebenzi yezoqoqosho Baza kwahlulwa babe ziindidi ezimbini ezisisiseko; ezokusetyenziswa kunye nemisebenzi yemveliso.
Imisebenzi yabathengi iya kwenziwa ziintsapho xa ziqhubeka nokuthenga iimpahla kunye neenkonzo. Ngale ndlela, kwaye ke azinakusetyenziselwa ukuphucula imveliso yezinye iinkonzo okanye iimpahla, okanye zithengiswe ngexabiso eliphezulu. Ifanitshala yasekhaya, ukutya, impahla njl.njl.
Imisebenzi yemveliso yenziwa nguRhulumente kunye neenkampani. Bathenga iimpahla kunye neenkonzo kwiinkampani zabucala okanye zikarhulumente, bezisebenzisa ukwenza imveliso yezinye iintlobo zeemveliso okanye iimveliso ezinokuthi ekugqibeleni zithengiswe.
Okuthethiweyo kumzi-mveliso weemoto kuyimizekelo, apho iimpahla zinokuba yinjini yemoto, iingcango, njl. Njl., Ezi ziya kusetyenziswa kwimveliso egqityiweyo njenge "iimpahla eziphakathi", okanye njengeemveliso eziza kuthengiswa kamva ngaphandle kokuya ukwahluka., njengoko befumanekile besebenza njengezinto ezizezinye.
Urhulumente kunye neenkampani banakho ukufumana iimpahla ezinkulu, iimveliso ezinokusetyenziselwa ukuvelisa ezinye iimpahla kunye neenkonzo, ngaphandle kokuba zisetyenziselwe ukusetyenziswa kokugqibela, kwaye zingayi kuba yinxalenye yemveliso egqityiweyo.
Uqoqosho luxhaswa kukufunda iiarhente zoqoqosho, kwibango lokuba bacinga okanye bayawuhlonipha umgaqo wokuqiqaKukho uthotho lweenjongo ezichaziweyo eziya kuthi zijolise kuzo izigqibo, kuthathelwa ingqalelo imida eya kuthi inyanzelise ukungabikho kweentlobo zezixhobo ezikhoyo.
Izidingo zomntu oza kuzama ukwanelisa imisebenzi eyahlukeneyo yezoqoqosho ziya kuthi zinento yokwenza nezixhobo ezigqityiweyo hayi kwiimeko ezimbalwa ekunzima ukuzifezekisa. Esi sesinye sezizathu zokuba kutheni Iinkcukacha ezithe kratya zamaqela athatha inxaxheba kule nkqubo kufuneka achazwe. Ukuzifunda kunye nokuziqonda kuya kubaluleka kwimpumelelo yezoqoqosho.
Ukuziphatha kwezi arhente kuya kuhlala kuyindawo ebalulekileyo enomdla kuqoqosho, Ngesi sizathu, ingqikelelo esele ikho ngokwazi nzulu indlela eziqhubeka ngayo ezi arhente kwimeko yobomi boqoqosho lwengingqi nakuphuhliso lwemveliso, ukuhanjiswa nokusetyenziswa kweenkonzo kunye neemveliso ezijikelezayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Iiarhente zoQoqosho
Ingeniso eyinkunzi kwimarike yemasheya, uza kwenza ntoni ngayo?
Kutheni le nto iimali ezixubileyo zinokuba yenye indlela yokutyala imali?